च्याट एप शुरु गर्ने गुगलको तयारी, ह्वाट्स एप र आर्इ म्यासेजलाई टक्कर ! | Daily State News
च्याट एप शुरु गर्ने गुगलको तयारी, ह्वाट्स एप र आर्इ म्यासेजलाई टक्कर !
१० बैशाख २०७५, सोमबार १४:०० मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
विश्लेषकहरुका अनुसार गुगलको Chat एपले फेसबुक स्वामित्वको ह्वाट्सएप तथा एप्पलको आइ मेसेज सर्भिसलाई कडा टक्कर दिने सम्भावना छ । गुगलको यस एपमा इमोजी, ग्रुप च्याट जस्ता कतिपय फिचर्स पनि हुनेछन् । तर उक्त एपले इनक्रिप्सनलाई सपोर्ट नगर्ने भएको हुुँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले भने कमजोर हुने विश्लेषण गरिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा